Popular News | Broadcasting News | Page 9
ဒေါ်ခင်မကြီးက " ထောင်ဒဏ်၊ငွေဒဏ် ချမှတ်မယ်ဆိုတာ အလုပ်ရှင်/အလုပ်သမား ၂ ဦး ၂ဘက်စလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်ပါတယ်။ အလုပ်ရှင်အတွက်လည်း တရားမျှတတဲ့ဥပဒေရဲ့ အကာအကွယ်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခုလိုထိရောက်တဲ့ပြစ်ဒဏ်များရှိမှသာ လက်ရှိအချိန်မှာအဖြစ်များပြီး ဖြေရှင်းရခက်ခဲနေတဲ့ အလုပ်ရှင်အလုပ်သမားအငြင်းပွားမှုများ ဆန္ဒပြမှုများကို တားဆီးကာကွယ်ဖြေရှင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ မြန်မာနိုင်ငံက အလုပ်သမားများအပေါ်မှာ လုပ်ခလစာသက်သာရုံသာမက မျှတတဲ့အလုပ်သမားအခွင့်အရေး များမပေးလိုတဲ့ ၀ိသမလောဘသားလုပ်ငန်းရှင်များရဲ့ ဘေးရန်က ကာကွယ်နိုင်ရန် ပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်များမှာ ထောင်ဒဏ်ကိုထည့်သွင်းရေးဆွဲ သင့်ပါတယ်" လို့ ထပ်လောင်းဆိုသွားပါတယ်။ Read More
မင်းဘူး(စကု)မြို့နယ်၊မန်းရေနံမြေမှကုန်တင်ကုန်ချအလုပ်သမားများလုပ်အားခပြည့်ဝစွာပေးနိုင်ရေးမည်ကဲ့သို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်မည်ကိုသိလိုခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းကိုမင်းဘူးမဲဆန္ဒနယ်မှဦးဝင်းဝင်းကယနေ့ကျင်းပသောပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင်မေးမြန်းခဲ့သည်။ Read More
လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ ရက်လောက်က စတင်ဖျက်သိမ်းလိုက်တာဖြစ်ပြီး မူလက မရန်ကထောင်မှာရှိနေတဲ့ တပ်မတော်လုံခြုံရေးဂိတ်နေရာဆီကိုရွှေ့လိုက်တာဖြစ်ဖြစ်ကြောင်း၊ ၈ မိုင်ပူးပေါင်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာ ရှိနေတဲ့ လမ်းအသုံးပြုခကောက်ခံခြင်းကိုလည်း ကားမိုင်းဘက်ကိုရွှေ့လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း၊ မရန်ကထောင်ဂိတ်ဟာလည်း ငွေကြေးကောက်ခံတဲ့ဂိတ်မဟုတ်တော့ဘဲ လုံခြုံရေးဂိတ်အဖြစ်သာသီးသန့်တည်ရှိတော့မှာဖြစ်ကြောင်း မိုးကောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဝင်းနိုင် ကပြောပါတယ်။ Read More
စက်မှုသီးနှံအဖြစ် ခြံစည်းရိုးကြက်ဆူ ဧက ၁၀၀၀ ကျော်တိုးချဲ့စိုက်ပျိုးဖို့ ရည်ရွယ်ချက်ပါရှိတဲ့ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ ၂၀၁၈-၁၉ ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေ(မူကြမ်း) ဟာ လွှတ်တော်မှာဝေဖန်ဆွေးနွေးခံရပြီးနောက် အဆိုပါ အစီအစဉ်ကို ပယ်ဖျက်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ Read More
"တစ်ခြားဒေသမှာ တစ်ဧကကို သူများတွေ တင်း ၆၀ လောက်ထွက်ကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ တင်း ၄၀ မပြည့်ဘူး။ အခုမြေပဲဥချချိန်တစ်ချိန်လုံးမိုးမရွာခဲ့ဘူး။ အခု မြေပဲဖော်ချိန်ကြမှရွာတယ်။ ဖော်ပြီးလို့ ရေထိရင်လည်း ပုတ်ကုန်တယ်" ဟု ၎င်းကဆိုသည်။ ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုများကြောင့် အပူချိန်မြင့်မားလာမှု ၊ အချိန်အခါမဟုတ်မိုးရွာသွန်းမှု၊ မိုးရေချိန်နည်းပါးလားမှုများကို ကိုအောင်ကိုဝင်းတို့ရွာသူ/သားတွေ ကျောကော့အောင်ခံခဲ့ရသည်မှာ ၁၀စုနှစ်တစ်ခုကျော်ခဲ့ပြီလည်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ဒေသအတွင်း သစ်ပင်သစ်တောပြုန်းတီးခဲ့မှုက ယခုကဲ့သို့ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုကို ကျောကော့အောင်ခံနေစေရသည့်အကြောင်းအရင်းဖြစ်သည်ကိုကား ကိုအောင်ကိုဝင်း တို့ ရွာသူ/သားများ နားလည်သဘောပေါက်ကြသည်။ ယင်းကြောင့်ပင် ကျေးရွာပတ်ဝန်းကျင်ရှိ မြေဧက ၅၀၀ ပေါ်တွင် အပင်ပေါင်း တစ်သိန်းနီးပါးကို ၎င်းတို့်ရွာသူ/သားများက စိုက်ပျိုးလိုက်ကြသည်။ အဆိုပါသစ်ပင်များတစ်နေ့ ကြီးပြင်းအရွယ်ရောက်လာခဲ့လျှင်သစ်ပင်သစ်တောကြောင့် ဥတုရာသီကောင်းခံစားရမည်ကို မျှော်လင့်နေကြခြင်းဖြစ်သည်။ "တစ်နေ့ ဒီအပင်တွေကြီးလာရင် ဒီအပင်တွေက ရလာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုလည်းခံစားချင်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ဒေသကမိုးခေါင်တယ်။ ဒါကြောင့်မိုးရေရဖို့ ပေါ့နော်" ဟု သပွတ်စုရွာသူ မစုစုမော်က ဆိုသည်။ Read More
တစ်ရွာလုံးဘယ်သူကမှ ဒီတောထဲကထင်းခြောက်တောင် ကောက်ပြီးမီးမစိုက်ရဲဘူး။ နတ်ကြောက်လို့ ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့တောလို့ပဲ ပြောရမှာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ အခုကြာလာတော့လည်းသစ်တောရဲ့တန်ဖိုးကိုလည်းသိလာကြပါပြီ" ဟု ဦးကံရှင်က ဆိုသည်။ "ဦးလှတင်အောင် နဲ့ မပန်းမြရင် ဆိုတဲ့နတ်မောင်နှမ က ဒီတောကိုစောင့်တယ်။ သူတို့က ပန်းပဲမောင်တင့်တယ်ရဲ့ ညာလက်ရုံး။ ဘုန်းကြီးတစ်ပါးက ဒီနှစ်မောင်နှမကို ရိုရိုသေသေဆက်ဆံဖို့ မှာခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်တို့ရွာသားတွေကတော့ ဒီထဲကနေ ကျိုးကျနေတဲ့ သစ်ကိုင်းခြောက်တောင်မသုံးရဲဘူး။ ဒီထဲလာရင် သမီးရည်းစားစကားလည်းမပြောရဲဘူး" ဟု ဦးကံရှင်က ပြောပြသည်။ Read More
ပြည်သူကနေ ပြည်သူကိုပြန်စောင့်ကြည့်ပြီး ထိန်းကျောင်းသယ်ဆောင်နိုင်တဲ့စနစ်ကို လူထုက အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ ပေါင်းစည်းမှ ရမယ်ဟု ဦးဖြိုးမင်းသိန်းပြောကြား
"မူးယစ်ဆေးဝါးပဲဖြစ်ဖြစ် လူကုန်ကူးမှုပဲဖြစ်ဖြစ် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိစ္စရပ်များဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကကတော့ ပြည်သူလူထုပါဝင်မှု အခြေခံလိုအပ်တယ်ဆိုတာကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရပ်ရွာအဆင့်အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားကနေ တစ်ဆင့် ပြည်သူကနေပြည်သူကိုပြန်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့ ထိန်းကျောင်းသယ်ဆောင်နိုင်တဲ့စနစ်ကို လူထုကအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ပေါင်းစည်းမှ ရနိုင်မယ့်အခြေအနေရှိပါတယ်" လို့သူက အမှာစကားပြောကြားရာမှာ ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။ Read More
"သေနတ်ရှိတဲ့ မုဆိုးက သေနတ်နဲ့ မရှိတဲ့မုဆိုးက ထောင်ချောက်နဲ့ အသီးသီး သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြရာ အခုဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်အတွင်းမှာ သတ္တ၀ါတွေဟာမျိုးဆက်ပါပျောက်တော့မယ့်အနေအထားရှိပြီး ကျား၊ ၀က်ဝံ ၊ဒရယ်၊ သမင်၊ အောက်ချင်းငှက် ၊ဥဒေါင်း၊ တောင်ဆိတ် သတ္တ၀ါတွေကို စာအုပ်အတွင်းမှာသာကြည့်ရူနေရတဲ့အခြေအနေရောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း......" Read More
အင်းလျားကန်မှာ အမှိုက်တွေ ညစ်ပတ်နံစော်နေတဲ့ကိစ္စနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မြို့ တော်ဝန်ကို မြေပြင်ဆင်းကြည့်စေချင်တယ်လို့....... Read More
တင်သွင်းထားသည့် တိုင်းဝန်ကြီးလောင်း၂ဦး ကိစ္စကို မကွေးဝန်ကြီးချုပ် ပြန်လည်ရုတ်သိမ်း
''သူတို့ နှစ်ဦးကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အရ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေက ကန့်ကွက်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး။သူတို့တွေ ပြည်သူတွေအတွက် ဘယ်လောက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြလဲ။ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ပါတီ မူ ဒါတွေကို ကြည့်ပြီး ကန့်ကွက်ကြတာ''ဟု ကန့်ကွက်မှုထဲပါသော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်က ပြောသည်။ Read More
"အရင်က ဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွေကနည်းတယ်။ အခုဟာက ဟိုတယ်တွေအများကြီးဆောက်ပြီး လူလဲမလာရော အခက်အခဲတွေဖြစ်ကုန်ရော"လို့ ဦးကျော်ခိုင်ကပြောပါတယ်။
အလုပ်သမား အရေအတွက် (၁၅)ဦ...
NLD ပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဒေါက်တာမျိုးညွှန့်ကမူ ဦးအယ်လ်ဖောင်ရှိုသည် ဥပဒေကို လွန်ကျူး၍ လုပ်ဆောင်ထားခြင်းမဟုတ်ကြောင်းမီဒီယာများအားဖြေကြားထား၏။ ဒေါက်တာမျိုးညွှန့်က "Church ကျောင်းရဲ့ နယ်နိမိတ်ကလည်း အရှ့မှာ ပေဘယ်လောက်၊ အနောက်ပေဘယ်လောက် အဲလိုစနစ်တကျလည်း မဟုတ်ဘူး။ ချောင်းလေးရှိတယ်၊ ဘာလေးရှိတယ် ဒီလိုပဲရှိတဲ့အခါကျတော့ ကျွန်တော်တို့…
ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးကျော်မျိုးက"ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုဒ်မ(၇၅)တွင်နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးနှင့်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုထိခိုက်စေသောမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆက်သွယ်မှုများကိုမဆိုရ ရှိနိုင်ရေးအတွက်နိုင်ငံသားများ၏မူလအခွင့်အရေးများကိုမထိခိုက်စေပဲပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ကသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းသို့လိုအပ်သလိုညွှန်ကြားဆောင်ရွက်နိုင်သည်ဟူ၍လည်းကောင်းပြဋ္ဌာန်းထားသဖြင့်Social Media Monitoring Teamကိုဖွဲ့စည်းခြင်းဟာတည်ဆဲဥပဒေများနှင့်ညီညွတ်မှုရှိပါတယ်"ဟုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်...
နှစ်ပေါင်းသုံးဆယ်နီးပါး အသုံးပြုအသားကျနေတဲ့ ညာမောင်းကားတွေနေရာမှာ လမ်းစနစ်နဲ့ကိုက်ညီမယ့် ဘယ်မောင်းတွေ အစားထိုးအသုံးပြုကြစေဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ ဘယ်မောင်းကား အရောင်းစင်တာတွေက၀ယ်ယူသူတွေအတွက် စိတ်ကျေနပ်မှုရစေမယ့် ၀န်ဆောင်မှုတွေ ပိုမိုရရှိစေဖို့ ဆောင်ရွက်ပေးဖို့နဲ့အစိုးရအပိုင်းကလည်း ပိုမိုတိကျတဲ့ မူဝါဒသတ်မှတ်ချက်တွေရှိဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ ရက်လောက်က စတင်ဖျက်သိမ်းလိုက်တာဖြစ်ပြီး မူလက မရန်ကထောင်မှာရှိနေတဲ့ တပ်မတော်လုံခြုံရေးဂိတ်နေရာဆီကိုရွှေ့လိုက်တာဖြစ်ဖြစ်ကြောင်း၊ ၈ မိုင်ပူးပေါင်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာ ရှိနေတဲ့ လမ်းအသုံးပြုခကောက်ခံခြင်းကိုလည်း ကားမိုင်းဘက်ကိုရွှေ့လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း၊ မရန်ကထောင်ဂိတ်ဟာလည်း ငွေကြေးကောက်ခံတဲ့ဂိတ်မဟုတ်တော့ဘဲ လုံခြုံရေးဂိတ်အဖြစ်သာသီးသန့်တည်ရှိတော့မှာဖြစ်ကြောင်း မိုးကောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဝင်းနိုင် ကပြောပါတယ်။
ဆော့လော်မှာပုံထားတဲ့ တန် ၁၃၀၀ ကျော် သစ်ပုံကြီးကိစ္စ အခုထိပြဿနာမပြီးသေး
ဆော့လော်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးလာမာလေးကတော့ အဆိုပါသစ်တန် ၁၃၀၀ ဟာအပုံလိုက်တွေဖြစ်ပေမယ့် ဘယ်သူ့အပုံဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေကို ကိုယ်စီအမှတ်အသားတွေပြုလုပ်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ အဆိုပါသစ်တွေကို အမှတ်အသားဖျောက်ပြီးသယ်ဆောင်သွားမှုတွေရှိတယ်လို့လည်း ဒေသခံတွေပြန်ပြောချက်အရသိရကြောင်း ပြောပါတယ်။
ဒီအပေါ် မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေး၊ လုဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီး ဦးဝဏ္ဏကျော် က ကွမ်းသီး၊ ကွမ်းသီး ခွံကုန်သွယ်မှုအတွက် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မကျသင့်ကြောင်း၊ ဒါပေမဲ့ ၀င်ငွေခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၅(က)အရ "ထိုဝင်ငွေရရှိချိန်၌ ၀င်ငွေခွန်ပေးဆောင်ရန် တာဝန်ရှိစေရမည်" လို့ ပြဋ္ဌာန်းပါရှိတာကြောင့် ကွမ်းသီးတင်ပို့…
အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း၎ခုမှ အ၀င်အထွက်ဂိတ်တွေကို အလို အလျောက်လမ်းအခပေးစနစ်(တိုးဂိတ်စနစ်) ပြောင်းလဲတပ်ဆင်သွားဖို့မန်းစည်ပင်စီစဉ်နေ
ဒီကားကွင်း ၄ ခုမှာ အီးတီစီစနစ်အတွက် စက်ကိရိယာတွေ၊ စီစီတီဗီတွေတပ်ဖို့လုပ်နေတာပါ၊ စက်တင်ဘာလကုန်အပြီးဆောင်ရွက် သွားမှာပါ လို့ မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်ကော်မတီဝင်ဦးကျော်ဇောအောင်ကပြောပါတယ်...
မြန်မာပြည်ပအလုပ်အကိုင်ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌဦးပီတာညွှန့်မောင်က"အဲဒါကတော့ဒီစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးရဲ့အစီရင်ခံစာအရအခုခေတ်နဲ့မသင့်လျော်ဘူးပြောတဲ့အတွက်ပြောင်းလဲဖို့အစီစဉ်ရှိတယ်ပေါ့လေ။ ဘယ်လောက်ပြောင်းလဲမယ်လို့တော့မသတ်မှတ်သေးဘူး။ အေဂျင်စီတွေကတော့ပိုပြီးတော့Depositသတ်မှတ်လိုက်ရင်တော့သူတို့အတွက်တော့အခက်အခဲထိုက်သင့်သလောက်တော့ရှိမှာပေါ့နော်"ဟုပြောသည်...
နိုင်ငံတကာမှာတော့ Cost Guard ကို ပုံစံ ၄ မျိုးနဲ့ ဖွဲ့လေ့ရှိကြောင်း တစ်ချို့ Cost Guard တွေဟာ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်မှာရှိပြီး အချို့ Cost Guardတွေဟာ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်မှာရှိကြောင်း၊ အချို့ Cost Guardတွေဟာ…
တစ်စုံတစ်ရာထူးခြားကိစ္စ မရှိကြောင်းနဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့က သေချာစွာ စစ်ဆေးနေတာကြောင့် ကျောင်းသား/မိဘတွေအနေနဲ့ မစိုးရိမ်ကြဖို့ ရဲတပ်ဖွဲ့က အသိပေးပြောဆိုထားပါတယ်။ "ကျောင်းမှာဆရာမတစ်ယောက်ရဲ့ဗီဒိုထဲမှာထည့်ထားတဲ့ပိုက်ဆံ ၅ သိန်း ကိုနှိုက်သွားပြီး ဘလက်ဘုတ်မှာ ကျောင်းကိုမီးရှို့မယ် ဘာညာရေးသွားလို့ အဖွဲ့တွေ လာစစ်ဆေးပေးနေတာပါ။ သူတို့လည်းသံသယရှင်းအောင်လို့ မိုင်းရှာခွေးတွေ၊…
လေးမျက်နှာမဲဆန္ဒနယ်မှဦးဇော်မင်းသိန်းမေးမြန်းသော"ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလမ်းများတွင်(၁၂)ပေအကျယ်နှင့်(၁၈)ပေအကျယ်လမ်းများ၏(S)ကွေ့နှင့်(ဂ)ကွေ့များတွင်ယာဉ်များရုတ်တရက်ဆုံပါကအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာရှောင်တိမ်းမောင်းနှင်နိုင်ရန်မျက်ကွယ်ဖြစ်စေသောသစ်ပင်ချုံနွယ်များဈေးဆိုင်အဆောက်အဦးများရှင်းလင်းရန်နှင့်Extra widthများပြုလုပ်ပေးရန်အစီအစဉ်ရှိမရှိနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း"ကိုဖြေကြားရာ၌ ထည့်သွင်း ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်...
အာရှနိုင်ငံအချို့တွင်စီးပွားဖြစ်စိုက်ပျိုးလျက်ရှိသည့်မန်ဂျန်းရှား(ဂျပန်ပိတောက်)Acacia Mangium သစ်ပင်အမျိုးအစားကိုနိုင်ငံအနှံ့ကျယ်ပြန့်စွာစိုက်ပျိုးလာနိုင်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးရန်အစီအစဉ်ရှိမရှိမေးခွန်းကိုလှိုင်းဘွဲ့မဲဆန္ဒနယ်မှဦးခင်ချိုကယနေ့ကျင်းပသောပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင်မေးမြန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယကဦးတီခွန်မြတ်က"မဟားတရားဆိုတဲ့စကားရပ်နဲ့မတရားဆိုတဲ့စကားရပ်ဘယ်ဟာပဲပါပါ အဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးတကယ်လို့မဟားတရားဆိုလဲပယ်ဖျက်မှာဖြစ်ပါတယ်။မတရားဆိုလဲအဲ့ဒီစကားရပ်ကိုလွှတ်တော်ကနေပယ်ဖျက်ပေးမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်"ဟုဆိုသည်။ ဒေါက်တာခွန်ဝင်းသောင်းက တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်၏ကန့်ကွက်မှုကို၎င်းအနေဖြင့်ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ထိုသို့ကန့်ကွက်ခြင်းကြောင့်ပြည်သူများပို၍အာရုံစိုက်သွားကြောင်းမီဒီယာများကိုပြောကြားခဲ့သည်။
၎င်းက"ဒီကနေ့ကျောင်းသားတွေဟာပျော့ညံ့လာနေတာတွေ့ရပါတယ်။ရဲရင့်မှု သတ္တိရှိမှု ပြတ်သားမှုနည်းပါးလာပါတယ်။ဒါစာသင်ခန်းထဲကစတာလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။ကျောင်းသားတွေမှာအတုယူစရာ ဆရာ ရှားပါးလာလို့ပါ။ ကျောင်းသူဆိုတာဆရာမတွေကိုအတုယူပါတယ်။ကျောင်းသားဆိုတာဆရာတွေကိုအတုယူပါတယ်။ပညာရေးစိတ်ပညာအရပါ"ဟုဆိုသည်။
အဆိုပါစနစ်အရ မီတာဖတ်စာရေးများဖြင့် လိုက်လံပြီးမီတာယူနစ်များကို တွက်ချက်ကောက်ခံမှုအစား အလိုလျောက်တွက်ချက်ကောက်ခံ သွားသည့်အတွက် မှားယွင်းမှုများ၊မသာမာသည့်နည်းများဖြင့် မီတာခိုးယူသုံးစွဲမှုများအပြင်မီတာ မသမာမှုများပြုလုပ်နိုင်တော့မည် မဟုတ်ကြောင်း ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကဆိုသည်။
လျှပ်စစ်မီးပြတ်တောက်မှု အသံများ လူထုကြားမှ မပြတ်ကြားနေ ရသည်ကို အားလုံး အသိပင်ဖြစ်သည်။ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိ သူများ မှာလည်း ယင်းပြဿနာကို ...........
ရန်ကုန်မြစ်အတွင်း ပြေးဆွဲသွားမည့် ရေကြောင်းတက္ကစီကို မေလတတိယပတ်တွင် စတင်ပြေးဆွဲပေးသွားတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးသယ်ယူပို့ ဆောင်ရေးကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှု ............
၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ဖျက်သိမ်းရေးအတွက် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်ကို တရားစွဲဆိုသွားရန်ရှိကြောင်း ၁၉၉ဝ ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်း .........
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အတွင်း တရားဝင် ခွင့်ပြုထားသော အကြွေ စေ့ဂိမ်းဆိုင်များ စာရင်းကို နေရာ အတိအကျဖြင့် ထုတ်ပြန်ပေးသွား မည်ဟု ..........
ငွေကျပ် နှစ်သောင်းခွဲထက်ပိုသည့် လက်ဆောင်ယူကြသော အစိုးရဝန်ထမ်း များ ရှိနေပါသဖြင့် ထိုသူတို့ကို အရေးယူ ပေးရန် တိုင်ကြားလာသည့်စာများ သမ္မတရုံး ...
ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲကား ရက်ပိုင်း အတွင်းတွင်ပင် ကျင်းပတော့မည်။ သို့ရာတွင်၂ဝ၁၂ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲတုန်း ကလောက် ပြည်သူတွေ တက်တက်ကြွကြွ စိတ်ဝင်တစား မရှိဟု ........
မြို့တော်ဂေါက်ကွင်းပြုပြင်ရန် ကျပ်သန်း ၅၅ဝ လျာထားမှုကို လွှတ်တော်မှ ပြန်လည်စိစစ်ဖြတ်တောက်ပေးပါရန် အကြံပြုတင်ပြသော်လည်း ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းမှုများမှာ မဖြစ်မနေလိုအပ်ကြောင်း ....
ယခုဆိုလျှင် အမျိုးသားဒီမိုက ရေစီအဖွဲ့ချုပ် အစိုးရ အနေဖြင့် အစိုးရ တာဝန်ကို ယူခဲ့သည်မှာ အ ချိန်ကာလ တစ်နှစ်ပင် ပြည့်လုနီး ပါး ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ ၂ဝ၁၆ ခုနှစ် ဧပြီ ၁ ရက်တွင် တက်လာခဲ့သော…
Popular Choice ဆိုသည်က ပေါ်ပြူလာနယူးစ်၏ ရွေးချယ်မှုဟူသည်ထက် တစ်ပတ် အတွင်းဖြစ်ခဲ့သော ထူးခြားမှုများ အနက် အများပြည်သူ စာဖတ်သူတို့ အတွက် ........
၂ဝ၁၅ ခုနှစ်က ရွေးချယ်ခံခဲ့ ကြရသော အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအ ဖွဲ့ချုပ် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် များ၏ ၂ဝ ရာခိုင်နှုန်း နီးပါးမှာ တိုင် ကြားခံထား ရကြောင်း....
ဘာသာစကားကို ဘယ်သူက ပိုင်သတဲ့လဲ
လွန်ခဲ့သော အနှစ် နှစ်ဆယ် လောက်က လူလတ်ပိုင်း စာရေး ဆရာနှစ်ယောက် စာလုံး/ စကား လုံး တစ်လုံးနဲ့ ပတ်သက်လို့ သူပိုင် တယ် ငါပိုင်တယ် ပြောဖူး ကြတယ်။ သူက ........
အစိုးရသစ် သက်တမ်း တစ်နှစ်တာကာလ အတွင်း ပါဝင်သူဦးရေ အများဆုံးနှင့် စည်းကမ်းသေဝပ်မှု အရှိဆုံး ဆန္ဒဖော်ထုတ်မှု တစ်ခု မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့က ရန်ကုန်တွင် ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ ယင်းမှာကား ..........
မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြည်ပမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ၃ဝ ရာခိုင်နှုန်းခန့် လျော့ကျသွား
၂ဝ၁၆ ခုနှစ် တစ်နှစ်တာကာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြည်ပမှ လာရောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသည် အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် ၃ဝ ရာခိုင်နှုန်းမျှ ကျဆင်းသွားကြောင်း သိရသည်။ ထိုသို့ ကျဆင်းသွား သည်ဆိုရာဝယ် .....
ရန်ကုန် စာအုပ်လမ်း ယာယီပိတ်ပွဲ အခမ်းအနားကို ဧပြီလဆန်းတွင် ပြုလုပ်မည်
ရန်ကုန် စာအုပ်လမ်း ယာယီ ပိတ်ပွဲအား ဧပြီလဆန်းပိုင်းတွင် ပြုလုပ် သွားမည်ဖြစ်ပြီး မိုးရာသီ အကုန်ဖြစ်သည့် နိုဝင်ဘာလခန့် တွင် ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်ပေးသွားမည် .....
လက်ရှိ မဟာသင်္ကြန် ရုံးပိတ်ရက် များသည် ရက်ရှည်ကာလ ရုံးပိတ်ရက်နှင့် ဘဏ်ပိတ်ရက်ရှည် ဖြစ်ပေါ်စေသဖြင့် နိုင်ငံတကာနှင့် ဆက် သွယ် ဆောင်ရွက်ရာ တွင် ရုံးလုပ်ငန်းများနှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းများ .....
ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာနက ဆရာ၊ ဆရာမများ ခေါ်ယူရာတွင် လာမည့် ပညာသင်နှစ် မှစပြီး မသန်စွမ်းသူ များကိုပါ ထည့်သွင်း ခေါ်ယူသွား မည်ဟု ..........
ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကို လက်ခံကျင့်သုံးသော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ အတွက် အင်အားကောင်းသော အတိုက်အခံ ပါတီများ မရှိမဖြစ် လိုအပ်နေပြီ ဟူသည့် အသံများ...
AA ၊ MNDAA နှင့် TNLA သုံးဖွဲ့သည် ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းမှ ပေါ် ပေါက်လာသော လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များဖြစ်သဖြင့် တပ်မတော်အနေနှင့် ငြိမ်းချမ်း ရေးဆွေးနွေးမည်မဟုတ်ကြောင်း တပ်မတော်မှ ........
နိုင်/ကျဉ်းဟောင်း တစ်ဦး ဘတ်စ်ကားစီးရေ (၇ဝဝ) တင်သွင်းခွင့် ရရှိသည် ဆိုသည့် သတင်း ရန်ကုန်တိုင်း ဝန်ကြီးချုပ် ငြင်းဆို
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတစ်ဦး ဘတ်စ်ကားစီးရေ ၇ဝဝ တင်သွင်းခွင့်ရရှိ သွားသည်ဟုသတင်းများထွက်ပေါ်ခြင်းသည် အမှန် တကယ်မဟုတ်ဘဲနာမည်ဖျက်လိုသော အစုအဖွဲ့များက လုပ်ဆောင်ခြင်းသာဖြစ် နိုင်ကြောင်း
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း ကျောက်မဲမြို့က အိမ်ကြီး တစ်ခုထဲမှာ အသက် ၄ဝ အရွယ် အမျိုးသမီးက သူ့ဘဝအကြောင်း ပြောပြရင်း မျက်ရည် ကျနေပါတယ်။
၁၉၆၅ ခုနှစ် သြဂုတ်လတွင် လွတ်လပ်ရေး ရခဲ့သည်။ စင်္ကာပူသည် ယခုအခါ နိုင်ငံ သက်တမ်း ၅၂ နှစ် ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီ။ တစ်ခါက မလေး လူပျို ..........
ညနေခင်းလေနုအေး တိုက်ခတ်နေပြီး သာသာယာယာ ရှိတဲ့ မန္တလေးမြို့ကျုံးနံဘေး သစ်ပင်အောက် အမှောင်ရိပ်မှာ နီနီက သူငယ်ချင်း တချို့နဲ့အတူ ...........
”အဘ အဲဒီတုန်းက အိုင်မို (Eymo) ကင်မရာ နဲ့ရိုက်ဖြစ်ခဲ့တာ။ လက်ကိုင် ကင်မရာလေးနဲ့ ရိုက်တာ။ အဲဒီ ကင်မရာထဲကို ပေ ၁ဝဝ ဖလင် ထည့်ပြီး ရိုက်ခဲ့တာ။ ဈာပနက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နဲ့ အာဇာနည်…
ကားတစ်စီးမှာ အရေးကြီးအဆုံး အစိတ်အပိုင်းက အင်ဂျင်၊ ဂီယာစတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေဖြစ်ပေမယ့် ကားတစ်စီး ရဲ့ ခန့်ညားမှုကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ဆေးသားအရောင်တွေကလည်း ကားချစ်သူပရိသတ်တွေအတွက် အတိုင်းအတာတစ်ခုအ ထိ အရေးပါနေပါလိမ့်မယ်။ ကားဆေးရောင်က တောက်ပသန့်ရှင်းနေမယ်ဆိုရင် ..........
ကျောက်ဖြူမြို့နယ်၊ ပန်းဒူမကျေးရွာ ဝန်းကျင်တွင် ရေအပြည့် ဖုံးလွှမ်းနေသည့် လယ်ကွင်း များနှင့် ပုစွန်ကန် များကိုတွေ့ရသည်။ ပင်လယ် ဒီရေ ကလည်း ...........
``ဘီးကလေးကိုစီး၊ အချစ်ကလေးကို တင်ပြီး၊ ခေါ်သွားရတာလေ၊ အင်မတန်မှပျော်၊ စကြာဝဠာ အဆုံးအထိ နင်းရမလား၊ သိပ်မော သွားလား မောင်ရယ်တဲ့၊ .......
ခရီးသွား မှတ်တမ်း ဆိုတာက လက်ရှိကျင်လည် နေတဲ့ဘဝမှာ သွားလာ ကျင်လည်လို့ ရသမျှထဲက သင်ခန်းစာ လောက် ကိုသာ ရေး ထားနိုင်တာပါ။ ဘဝ အဆက်ဆက် ကြုံခဲ့ရတဲ့ ...........
သင့်ရဲ့ချစ်သူ၊ သင့်ရဲ့တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်ကို တကယ်ချစ်ရဲ့လား ဆိုတာ ဘယ်သူကမှ အာမခံပေးလို့ မရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ...........
ကျောင်းသား/သူ ၂သိန်းကျော် အောင်မြင်ခဲ့ကြသော ၂၀၁၇ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ တွင် အကျဉ်းစာစစ်ဌာနများမှ နေ၍ ၀င်ရောက်ဖြေသည့် အကျဉ်းသူ/သား အချို့လည်း .........
လူတိုင်း တတ်နိုင်တဲ့ အိမ်ရာ လိုအပ်ချက် များတဲ့ ပြသနာကို ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ထိပ်ဆုံး မြို့ကြီး (၅၀)စာရင်းမှာ နယူးယောက်မြို့က ထိပ်ဆုံးမှာ ရပ်တည်နေပါတယ်။ ဒီလို သင့်တင့်မျှတတဲ့ ...........
“၂၀၁၇ တက္ကသိုလ်​ဝင်​တန်းစာ​မေးပွဲအောင်စာရင်းထူးခြားချက်​ များ”
၂၀၁၇ ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲရဲ့ အောင်စာရင်းရလဒ်များကို ဒီကနေ့ ဇွန်လ ၁၇ ရက်နေ့ နံနက် ၆နာရီမှာပညာရေးဝန်ကြီးဌာက ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းမှာတော့ ည ၁၂ နာရီမထိုးခင်ကတည်း ကသက်ဆိုင်ရာ ကျောင်းများမှာ အောင်စာရင်းစာရွက်များကပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ တစ်နိုင်ငံလုံးက အောင်စာရင်းတွေကိုလည်း…
အညာဒေသ ရက်ကန်းထည်ကို ခိုင်မာတဲ့ ဈေးကွက်ရောက်တဲ့ အထိ အမျိုးသမီးတွေက စီစဉ်နေပါတယ် မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး ပခုက္ကူမြို့နယ်၊ ချိုင်ကျေးရွာထဲက......
ရှမ်းပြည်နယ်၊ ရွာငံမြို့ရှိ လိမ္မော် ခြံလုပ်ငန်း တိုးတက်ရေးမှာ အရင်း အနှီး၊ မျိုးစေ့၊ နည်းပညာ ဆိုင်ရာ အကူအညီများ ရရှိမှုအပေါ် မူတည် နေသည်ဟု
မကြာခင် အခု ကျင်းပနေတဲ့ လွှတ်တော်မှာ လွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ်တာဝန် က ပြန်လည် ရုပ်သိမ်း ခြင်းဥပဒေ ကို ပြည်ထောင်စု အထွေ ထွေ ရွေးကောက်ပွဲ......
ယခင်အပတ်မှ အဆက် နံနက်ခင်း မြင်ကွင်း ပစ္စည်းများ သိမ်းဆည်းပြီးချိန် မှာ မနက် ၇ နာရီပဲရှိသေးသည်။ ချန်ဂီလေဆိပ်ထဲမှာကော ဒင်ပါဆာ လေဆိပ် ထဲမှာပါ ခြေ တိုနေအောင် လျှောက်ခဲ့ရ၍ မောပန်းနေသဖြင့် အိပ်မောကျသွားရာ အိပ်ရေးဝပြီး…
နှိုက်ရင် ငါးကျပ် ဆေးရင် တစ်ဆယ်
ပိတ်စ အနီပေါ် ဆေးဖြူသုံးပြီး ထင်းနေအောင် ရေးထားတဲ့ ကြော် ငြာက ရွှေပွဲလာ ပရိသတ်တွေကို အတော် ဆွဲဆောင်နေသဗျ။ ကိုကိုတွေက ပြုံးစိပြုံးစိနဲ့ ယိုင်ပတ်ကာပြီး ဓနိမိုးထားတဲ့ အလုံပိတ် တဲလေးထဲကို ဝင်ကြဖို့ တာစူနေကြသလို အပျိုတွေ…
ဒီမိုကရက်တစ် ဒီဘိတ်များ၏ ပျောက်ဆုံးနေသော အနုပညာ
ကမ္ဘာကြီးမှာရော ကျွန်တော် တို့ နိုင်ငံမှာပါ အသည်းအသန် အလိုအပ်ဆုံး အရာတစ်ခုက နိုင်ငံ ရေးဆွေးနွေး ငြင်းခုံပွဲ(Political Debate) တွေကို .............
ဇာတ်သမားများ အသက် ဘယ်လောက်ကြီးကြီး ဆိုင်းသံ ကြားလျှင် ကချင်သည်ဟု အဆိုရှိ ကြသည်။ ကျွန်တော်လည်း ယခု အသက်ကြီးပါပြီ။ ဆိုင်းသံကြားလို့ ကချင်သော ဇာတ်သမား မဟုတ်ပါ။ သတင်းတစ်ခု ကြားရလျှင် ငယ်ဘ ဝကို စိတ်ကရောက်သွားသည်။…
ဆိုမာလီယာ၏ အဆိုးဆုံးအကြမ်းဖက်လုပ်ရပ် မိုဂါဒစ်ရှူး ထရပ်ကားဗုံး လူ၅၀၀ခန့်သေကျေဒဏ်ရာရ
ဆိုမာလီနိုင်ငံမြို့ တော် မိုဂါဒစ်ရှူး၌ ကမ္ဘာပေါ်တွင် နှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်း အဆိုးရွားဆုံး အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များအနက် တစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ အနည်းဆုံး လူ၅၀၀ခန့်ပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရမှု သေကြေ မှုများဖြစ်ခဲ့ကြောင်း .......................................
ဆီးမီးဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်အဖြစ် မနက်ဖြန် မှာယဉ်ပြိုင်ကစားကြမယ့် ထိုင်းအသင်းနဲ့မြန်မာအသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်အတွက် မန်မာပရိတ်သတ် (၆၀၀၀)စာ လက်မှတ်ခွဲတမ်းရရှိခဲ့ပြီး မလေးရှားစံတော်ချိန် မနက်(၈:၀၀)နာရီမှာ စတင်ရောင်းချပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။စတင်ယှဉ်ပြိုင်ကစားကြမယ့်အချိန်ကတော့ မြန်မာစံတော်ချိန် နေ့လည် (၂:၃၀)ဖြစ်ပါတယ်။ရရှိထားတဲ့လက်မှတ်ခွဲတမ်းကနေ.....................
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ လက်ရှိ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရန်ကုန်မြို့ရှိ အမေရိကန်သံရုံး ကနေကြေညာချက် တစ်စောင် ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ် ။ကြေညာချက်ထဲမှာ........
မလေးရှားဆီးဂိမ်းရဲ့ အုပ်စု(ခ)နောက်ဆုံးပွဲစဉ်တွေ ပြီးဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး အုပ်စုတတ်ရေးအတွက်ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်ခဲ့တဲ့ ဗီယက်နမ်အသင်းနဲ့ထိုင်းအသင်းတို့ တွေ့ဆုံမှုမှာ ထိုင်းအသင်းက သုံးဂိုးဂိုးမရှိ ရလဒ်နဲ့ အနိုင်ရခဲ့ပြီး အုပ်စုဗိုလ်အဖြစ်တတ်ရောက်လာခဲ့တာကြောင့် (၂၆)ရက်နေ့မှာတော့ မြန်မာအသင်းနဲ့ တွေ့ဆုံယှဉ်ပြိုင်ရတော့မှာပါ။အခုပွဲမတိုင်ခင်အထိ.............
အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် နှစ် ၁၀၀ ကာလအတွင်း မိဘနှစ်ပါးရော သားသမီးနှစ်ဦးပါ လေယာဉ်မှူးများဖြစ်ကြသည့် မိသားစုပေါ်ထွက်လာကြောင်းသိရသည်။ယင်းမိသားစုမှ မိဘနှစ်ပါးသည် သူတို့ဝါသနာပါသည့် လေယာဉ်မှူးအဖြစ်ကို ဖြစ်မြောက်အောင် ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြပြီး၊ မိမိတို့၏ သားသမီးနှစ်ဦးကိုပါ လေယာဉ်မှူးများဖြစ်လာစေရန်................
မလေးရှားဆီးဂိမ်းကျင်းပရေးကော်မတီမှ မြန်မာအသင်းယှဉ်ပြိုင်မည့်ပွဲစဉ်အချို့ကို ကွင်းအခြေနေကြောင့် Liveမလွှင့်နိုင်ပါကြောင်းကြေငြာခဲ့သော်လည်း............
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဘင်္ဂါလီများအရေး အမြန်ဆုံးပြေလည်ရေးအတွက် မလေးရှားနိုင်ငံအနေဖြင့် နိုင်ငံတကာမူဝါဒလမ်းစဉ်များဖြင့် ဆက်လက် တွန်းအားပေးသွားမည်ဟု မလေးရှား ဒု-နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဆို
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဘင်္ဂါလီများအရေး အမြန်ဆုံးပြေလည်ရေးအတွက် မလေးရှားနိုင်ငံအနေဖြင့် နိုင်ငံတကာမူဝါဒလမ်းစဉ်များဖြင့် ဆက်လက် တွန်းအားပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ...........................
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မာရ၀ီမြို့ရှိ ဘာသာရေး အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက် များကို နှိမ်နင်းရာ တွင် နိုင်ငံခြားသား များကို အသေရမိကြောင်း ဖိလစ်ပိုင် တပ်ချုပ် .........
(ဖလော်ရီဒါ၊ မေ ၃၀) ကမ္ဘာကျော် ဂေါက်သီးရိုက်သမား တိုင်းဂါးဝုဒ် အား အရက်အလွန်အကျွံသောက်ပြီး ကားမောင်းနှင်မှုနှင့် ယမန်နေ့ကဖမ်းဆီးလိုက်သည်။ သို့ရာတွင် တိုင်းဂါးဝုဒ် ကမူ သူ၏ကျောရိုးကို ပြန်လည်ကောင်းမွန် လာစေရန် ကုသနေမှု၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကြောင့် ယခုကဲ့သို့ဖမ်းဆီး ခံရခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောသည်။…
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင် လိင်တူဆက်ဆံသူ အမျိုးသား နှစ်ဦးအား တစ်ဦးစီလျှင် ကြိမ်ဒဏ် ၈၃ ချက်စီ ရိုက်နှက် အပြစ်ပေးလိုက်သည်။ .....
မန်ချက်စတာ မိုးလုံလေလုံ ကစားကွင်းကြီးတွင် အသေခံ ဗုံးခွဲမှု တစ်ခုဖြစ်ပွားရာ ၂၂ ဦးသေဆုံး၊ ၅၉ ဦးဒဏ်ရာရ
မန်ချက်စတာမိုးလုံလေလုံ ကစားကွင်းကြီးတွင် အသေခံဗုံးခွဲမှု တစ်ခုဖြစ်ပွားရာ ကလေးငယ်များ အပါအ၀င် လူ ၂၂ ဦးမျှ သေဆုံးပြီး ၅၉ ဦးထက်မနည်း ....
(ဆိုးလ်၊ မေ ၂၃) မြောက်ကိုရီးယား တို့သည် တာလတ်ပစ်ဒုံးပျံတစ်ခုကို ပြီးခဲ့သည့် တနင်္လာနေ့က စမ်းသပ်ပစ် လွှတ်ခဲ့ပြီး၊ ထိုသို့သော ဒုံးပျံတိုိ့ကို အမြောက် အများ ထုတ်လုပ်ရန် အတွက် နည်းပညာနှင့် ပစ္စည်းများ အပြည့်အစုံ လက်ဝယ်…
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ ပန်ဂါဆီနန် ခရိုင်ရှိ ဘူဂယ်လွန်မြို့တွင် မြန်မာအမျိုးသား တစ်ဦး ကြိုးဆွဲချ သေဆုံးနေကြောင်း သိရသည်။
မိုက်ခရိဆော့ဝင်းဒိုးစ် အသုံးပြုသည့် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှ ကွန်ပျူတာ ၃သိန်းခန့်ဆီသို့ ကပ်ငြိကူးစက်တိုက်ခဲ့သည့် WannaCry ဟု အမည် တွင် သည့် .......
(မော်စကို၊ မေ ၁၆) မြောက်ကိုရီးယား တို့၏ နောက်ဆုံး ဒုံးပျံစမ်းသပ်မှုသည် အန္တရာယ်ရှိသည် မှာမှန်သော်လည်း ခြိမ်းခြောက်မှု တစ်ခုပာုပြော ဆိုနေကြခြင်း ကိုမူ ဆန့်ကျင်ကြောင်း ရုရှားသမ္မတပူတင်က ပြစ်တင်ပြောကြားလိုက်သည် ကိုးရီးယားနှစ်နိုင်ငံ အရေးနှင့် ပတ်သက်၍လည်း ငြိမ်းချမ်းစွာ…
တောင်ကိုရီးယားသမ္မတ အသစ် မစ္စတာ မွန်ဂျေးအင် သည် ဇွန်လနှောင်းပိုင်းခန့် တွင် အိမ်ဖြူတော်သို့ သွားရောက်၍ သမ္မတ ထရမ့်နှင့်........
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် facebook အသုံးပြုမှု တားမြစ် ပိတ်ပင်မှုဟု ကြေညာမှု ထိုင်းအစိုးရ ပြန်လည် ရုပ်သိမ်း
တော်ဝင်မိသားစုကို အသရေ ဖျက်ရာရောက်သည့် facebook အကောင့်များကို မဖယ်ရှားပေးလျှင် ထိုင်းနိုင်ငံတွင် facebook အသုံးပြုနေခြင်း ..........
ဥရောပသို့ ခရီးသွားကြမည့် အမေရိကန် နိုင်ငံသား များအား နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနက ခရီးသွား သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်
ဥရောပသို့ ခရီးသွားကြမည့် အမေရိကန်နိုင်ငံသား များအား အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံခြား ရေး ဝန်ကြီးဌာနက ခရီးသွား သတိ ပေးချက် တစ်ရပ်ကို .........
မြောက်ကိုရီးယားတို့၏ ဆက်တိုက် ခြိမ်းခြောက်နေမှုကို ပြန်လည် တုန့်ပြန်သည့် အမေရိကန်၏ ဒုံးခွင်းစနစ် သည် တောင် ကိုးရီးယားနိုင်ငံ တွင် ......
ပအိုဝ်ရွာ"နားဘောင်" ရဲ့ ဈေးနေ့
တောင်ကြီး မြို့ကနေ ကက္ကူဘုရား သွားတဲ့ လမ်းအတိုင်း လာခဲ့ရင်တောင်ကြီး နဲ့၉မိုင်အကွာ မှာနားဘောင် ဆိုတဲ့ ပအိုဝ်းရွာလေး ကိုရောက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ ရွာလေး ရဲ့ ...........
မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ လက်ဝဲအောက်စွယ်တော် ကိန်းဝပ်စံပယ်တော်မူရာ သီရိလင်္ကာ
မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ လက်ဝဲအောက် စွယ်တော်သည် ယခုအခါ သီရိလင်္ကာ နိုင်ငံ၊ ကန္ဒီမြို့တွင် ကိန်းဝပ်လျက်ရှိသည်။ ယခင်က အိန္ဒိယတွင် နှစ်ပေါင်း ၆ဝဝခန့် ဗြဟ္မဒတ်မင်းအဆက်ဆက်ကထိန်းသိမ်း ပူဇော်ခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးမင်း ဂုဟသီဝမင်း လက်ထက်တွင်စွယ်တော်အားလာရောက် တိုက်ခိုက်လုယူမှု ဖြစ်ခဲ့ . . .
ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံဟာ ရေပေါ်ရေအောက်၊ မြေပေါ်မြေအောက် သယံ ဇာတ အလွန်ပေါကြွယ်ဝတဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါ တယ်။မြေပေါ် မြေအောက်မှာ ဘယ်လောက် ပေါများတယ်ဆိုတာ အများသိပြီးသားဖြစ်ပေမယ့် ရေပေါ်ရေအောက်အကြောင်းကိုတော့သိ သူနည်းလှပါတယ်။
အတိတ်တစ်ခေတ် ဖြတ်သန်း ပျံလွင့်
အနည်းဆုံးသက်တမ်း နှစ်ပေါင်း ၅ဝ နီးပါးရှိသော ရှေးဟောင်း (Classic) ကား များနှင့် ရှေးဟောင်းဆိုင်ကယ်များပြပွဲကို ဇန်နဝါရီ ၂၈ ရက်နှင့်၂၉ ရက်တွင် ရန်ကုန် မြို့ ပြည်သူ့ရင်ပြင်၌ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ပြပွဲသို့လာရောက် ကြည့်ရှုသူတစ်ဦးလျှင် ဝင်ကြေးအဖြစ် ကျပ်ငွေ ၁ဝဝဝ သတ်မှတ်ထားကာ . . .
ချင်းပြည်နယ်ရဲ့ ကန်ပက်လက်မြို့နယ် အော်သရောတောင်တန်း ပေါ်မှာ သဘာဝအလှတရားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တတိယအမြင့်ဆုံး တောင်ဖြစ်တဲ့ ခေါနုစုမ်ခေါ် နတ်မတောင်ခေါ် ဝိတိုရိယတောင်ပေါ်မှာ အလှတရားများစွာ အိပ်စက်နေပါတယ်။ တောင်ပေါ်မှာ အဖိုးတန်တိရစ္ဆာန် များကျက်စားပြီး ကျေးငှက်မျိုးစုံကျူးရစ်သံနဲ့အတူ သစ်ခွမျိုးစုံက သဘာဝ အလှတရားကို ပိုလှအောင် ဆင်ယင်ထားပါတယ်။
YBS စနစ်​ စတင်​ကျင့်သုံးသည့် ဇန်နဝါရီ ၁၆ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်​မြို့၏ မှတ်တိုင်​အားလုံးနီးပါး၌ ခရီးသွားပြည်သူများ စုပုံလျက်​ရှိခဲ့ပြီး Volunteer လူငယ်​​တွေက ကြိုးစားကူညီ​၊ အခမဲ့ကားများပြေးဆွဲပြီး ခရီးသွားများ အဆင်ပြေစေရန် လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ အပြောင်းအလဲကာလ ဘတ်စ်ကားတော်လှန်ရေးအတွက် . . . .
လွတ်လပ်ကမ္ဘာ ထာဝရတည် ဒါမြန်မာပြည်
(၆၉) နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အခမ်းအနားသည် NLD အစိုးရသစ် ပထမဆုံး တာဝန်ယူကျင်းပရသည့် အခမ်းအနားဖြစ်ပြီး ယခင်နှစ်များထက် ယခုနှစ် လွတ်လပ်ရေးနေ့သည် တမူထူးခြားမှုရှိကြောင်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အချို့က သုံးသပ်ပြောဆိုခဲ့သည်။
''၂ဝ၁၇ ခုနှစ်သည် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်သားများအတွက် မင်္ဂလာရှိသောနှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေ။ မင်္ဂလာဟူသည်မှာ စစ်မှန်သော ကြီးပွားတိုးတက်မှုဖြစ်သည်။ ...
ငြိမ်းချမ်း စိမ်းလန်း ဒီမိုကရေစီ ပန်းပွင့်များ
ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြု ကရင့်တပ်မတော် DKBA ရဲ့ ၂၂ နှစ်ပြည့် တပ်မတော်နေ့ကို ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့က ကရင်ပြည်နယ်၊ မြဝတီခရိုင်အတွင်း တပ်ဖွဲ့ရဲ့ဌာနချုပ် ဆုံဆည်းမြိုင်ကျေးရွာမှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ပြင်သစ်-မြန်မာ ယဉ်ကျေးမှုချင်း မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ခဲ့တာကတော့ ဒီနှစ်ဆိုရင် ၅၅ နှစ်တိုင်ခဲ့ပါပြီ။ ဒီလို (၅၅) နှစ်သက်တမ်း ပြည့်မြောက်တဲ့အနေနဲ့ ပွဲတော်တစ်ခုကို ရန်ကုန်မြို့မှာ ခြိမ့်ခြိမ့်သဲကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ဒီပွဲတော်ကတော့ အများစိတ်ဝင်တစား ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြတဲ့ ''မင်္ဂလာပါ'' ပွဲတော်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လမ်းမတော်၊ ပန်းဘဲတန်း၊ ကျောက်တံတားနှင့် လသာမြို့နယ်များမှ သစ်သီး ဆိုင်များနှင့်စားသောက်ဆိုင်များ ပြောင်းရွှေ့ရောင်းချနေကြပြီ ဖြစ်သည်။ ညဈေးတန်းကို ကမ်းနားလမ်းတစ်လျှောက် (အောင်ရတနာလမ်းမှ ပန်းဆိုးတန်းလမ်းအထိ)၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ် မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံလမ်း (မဟာဗန္ဓုလလမ်းမှ ကမ်းနားလမ်းကြား)နှင့်ဘဏ်လမ်း (မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံလမ်းမှ ပန်းဆိုးတန်းလမ်းကြား)ဟူ၍ သတ်မှတ်ထားပြီး စုစုပေါင်း ဆိုင်ခန်း တစ်ထောင့်ခြောက်ရာကျော်
လာမည့် နိုဝင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့တွင် တောင်ကြီး တန်ဆောင်တိုင် ရိုးရာ မီးပုံးပျံ ပွဲတော်ကို စတင် ကျင်းပတော့မည် ဖြစ်သည်။ ပွဲ ကျင်းပမည့်နေ့ ကတော့ ၆ ရက်နေ့မှ စတင်ပြီး ဆယ်ရက်ကြာ ကျင်းပမည် ဖြစ်သည်။ ပွဲတော်ည အတွက်.........
"ဒေသခံ ရခိုင် ပြည်သူတွေ အိုးပစ် အိမ်ပစ် တိမ်းရှောင်ခဲ့ ကြရတယ်"
၂ဝ၁၆ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၉ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်း တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တော မြို့နယ် အတွင်းရှိ အမှတ်(၁) နယ်ခြားစောင့် ရဲကွပ်ကဲမှု ဌာနချုပ် (ကျီးကန်းပြင်)၊ ကိုးတန်ကောက် ရဲကင်း စခန်းနှင့် ငါးခူရ နယ်မြေရုံး များသို့ အကြမ်းဖက် သမား များက ..........
ဖော့ဖိနပ် တစ်ရံနဲ့ ရေနံ လက်ယက်တွင်း ရာဇဝင်
နောက်ဘဝကျ မိသားစုရပါစေ မိကောက်ရရေ
“သူတို့ဘ၀_သူတို့အကြောင်း” အမှောင်လောကမှ လာသောအလင်း (သို့) စကော်ပီယံဂိုဏ်း၏ ပဲ့ကိုင်ရှင် အပိုင်း(၂)
“သူတို့ဘ၀_သူတို့အကြောင်း” အမှောင်လောကမှ လာသောအလင်း (သို့) စကော်ပီယံဂိုဏ်း၏ ပဲ့ကိုင်ရှင် အပိုင်း(၁)
“သူတို့ဘ၀_သူတို့အကြောင်း” ဒေါက်တာအောင်မျိုး နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း အပိုင်း ( ၁ )
မြန်မာစာဌာနအပေါ် အလွမ်းစိတ်နှင့် မြန်မာစာကျောင်းသားများအတွက် ဆရာ နောင်ကျော် ရဲ့ အမှတ်တရစကား
“တက်နေတဲ့ဒေါ်လာဈေးပေါ် သွင်းအားစုတို့အမြင်” တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း
ကြမ်းတမ်းတဲ့ လောကဓံကိုခံစားရင်း အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသော တောဆင်မလေး မိချောရဲ့ ၂၃ ရက်တာဘ၀မှတ်တမ်း
စာသင်ကျောင်းအသစ်ဆောက်ရန်၊ဟောင်းနွမ်းကျောင်းများအားပြင်ဆင်ရန် ချထားပေးမည်ဆိုသော အသုံးစရိတ်ဘက်ဂျက်များထဲမှ အချို့ကို မပေးတော့ဘဲလျှော့ချ
''ပဲခူးတိုင်း ၂၈မြို့နယ်အတွင်းမှာ အသစ်/ပြင်ဆင်ဆောက်လုပ်ရမယ့် အခြေခံပညာကျောင်းပေါင်း ၆၀၉ကျောင်းကို ဘက်ဂျက်ငွေကျပ်သန်း ၄၁၀၀နဲ့အသစ်ပြင်ဆင်တည်ဆောက်ဖို့တောင်းခံထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ခု ရတဲ့ ဘက်ဂျက်က ကျပ်သန်း ၁၉၀၀ပဲ ရှိတယ်။ဒါ့ကြောင့် ကျန်တဲ့ ကျောင်းတွေဘာမှ လုပ်လို့ မရတော့ဘူး''ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
"စိတ်ဝင်စားဖွယ်တွေ့ရှိချက်တစ်ခုကတော့ တက္ကသိုလ် ကောလိပ် ဆရာမ အားလုံးရဲ့ ၈၁. ၉၃ ရာခိုင်နှုန်း ၅ ဦးလျှင် ၄ ဦးခန့် က ကျောင်းတစ်ကျောင်းတည်းမှာပဲ အတည်တကျအမြဲတန်းတာဝန်ထမ်းဆောင်လိုကြကြောင်းဆန္ဒပြုကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တက္ကသိုလ်အသီးသီးဟာ မြို့ကြီးမြို့ငယ်နေရာဒေသအသီးသီးမှာတည်ရှိနေကြပြီး ဆရာ/မ များရဲ့ဆန္ဒကိုပါ…
တနိုင်းဆေးရုံမှာ ဆရာဝန်ပြတ်လပ်မှု ၃ လခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီ
"ဆေးရုံတစ်ခုလုံးမှာ ဆေးရုံအုပ်တစ်ယောက်ရှိတယ်။ သူပဲ ဆေးရုံအုပ် / သူပဲ လက်ထောက်ဆရာဝန် လုပ်နေရတော့ ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ဆေးသွားကုတဲ့သူတွေ က ပိုအခက်အခဲဖြစ် ရတယ် " လို့ တနိုင်းမြို့နယ်ရပ်မိရပ်ဖတစ်ဦးက ဆိုပါတယ်။
ဒဂုံမြို့သစ်၊ ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်နဲ့ ကပ်လျှက်ရှိတဲ့ (၂၅) ကုတင်ဆန့်၊ တောင်ဒဂုံ မြို့နယ်ဆေးရုံ ကို ကုတင်(၅၀) ခန့်တိုးမြှင့်ခွင့်ရရှိရေးအတွက် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားတယ်လို့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး ဦးဇော်အေးမောင်က ပြောပါတယ်။
''အစိုးရဆေးရုံ၊ဆေးခန်းတွေမှာ သူနာပြုခွင့်ပြုဦးရေ ၃၅၃၂၁ ဦိးရေရှိပေမယ့် လက်ရှိမှာ ၂၀၀၂၁ သာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတယ်။ သူနာပြုဦးရေ တစ်သောင်းငါးထောင်နှစ်ရာကိုးဆယ့်ကိုးဦးလိုအပ်နေပါတယ်။ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ပျမ်းမျှအင်အား ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ သာ အစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေရတာပါ'' လို့ ဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။
ပြည်‌သူလူထု အ‌ခြေပြု ဂျပန်‌ဦး‌နှောက်‌‌ရောင်‌‌ရောဂါ ကာကွယ်‌‌ဆေးထိုး အစီအစဉ်‌ကို ရန်‌ကုန်‌မြို့အတွင်းရှိ မြို့နယ်‌ များတွင်‌ ဒီဇင်‌ဘာလ ၁၁ရက်‌‌နေ့ မှ ၂၀ရက်‌‌နေ့ အထိ ..........
"ကျောင်းအခြေပြု ကာကွယ်ဆေးထိုးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေစဉ်အတွင်း သေဆုံးသူ (၅)ဦးရှိခဲ့ပါသည်။ နည်းပညာဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများအရ သေဆုံးမှုများသည် ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသည့်အချိန်နှင့် တိုက်ဆိုင်၍ အခြားရောဂါများကြောင့် သေဆုံးခြင်းဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်"လို့ အဲဒီ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာရေးသားဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်ပ ခရီးသွား ၀င်ရောက်မှု ၃သန်းကျော် ရှိလာ
ယခုနှစ်‌ ၁၁လတာ ကာလအတွင်း မြန်‌မာနိုင်‌ငံသို့ ပြည်‌ပ ခရီးသွားဝင်‌‌ရောက်‌မှု အရေအတွက်ဟာ ၃သန်းကျော် ရှိပြီလို့ ဟိုတယ်‌ နဲ့ခရီသွားဝန်‌ကြီး ဌာနက.........
ခေတ်သစ် ငြိမ်းချမ်းရေးအများပိုင်ကုမ္ပဏီကို Bus Operator အဖြစ်မှ တာဝန်ရပ်စဲဟုသိရ
အဓိကက‌တော့ သူတို့ကYRTA ကို ခွင့်ပြုချက် မ‌လျောက်ထားဘဲ ယာဉ်အများအပြားကို ယာဉ်လိုင်းထဲကို ဝင်ရောက်ပြေးဆွဲခွင့်‌ပြုတာကြောင့်လို့သိရ တယ်‌။ ဝန်‌‌ဆောင်‌မှုနဲ့အုပ်‌ချုပ်‌‌ရေးအားနည်းလို့ ရပ်‌စဲလိုက်‌တယ်လို့ သိရပါတယ် . . .
ပုပ္ပါးတောင်ဝန်းကျင်နေရာ တစ်ချို့မှာ မြေကျွံမှုတွေ ရှိနေပေမယ့်လည်း ပုပ္ပါးတောင်ကလပ် ခရီးသွားလာမှု ကိုတော့ တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားခြင်း မရှိသေးဘူး ......
အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ တဆင့် ချင်းပြည်နယ် ရိဒ်ရေကန်သို့ ညအိပ် လည်ပတ်နိုင်ရန် နှစ်နိုင်ငံ ဆွေးနွေးနေ
အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ လာရောက်လည်ပတ်ကြသည့် ခရီးသွား များအား နယ်စပ်မှတဆင့် မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းရှိ ချင်းပြည်နယ် ရိဒ်ရေကန်ဒေသတဝှိက်ကို ညအိပ်ခရီးစဉ်
ယခုနှစ်အတွင်း ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွား ဝင်ရောက်မှုမှာ သြဂုတ်လကုန်အထိ (၂.၂၇)သန်းကျော်ရှိခဲ့ပြီး ယခင်နှစ်ကာလတူထက် (၂၂)ရာခိုင်နှုန်းကျော် ........